Na - ebipụta Live: Akwụkwọ, Mee atụmatụ na mepụta Usoro Ọdịnaya Gị | Martech Zone
Tọzdee, Machị 17, 2016 Saturday, March 19, 2016 Douglas Karr
ScribbleLive mara ọkwa na mwepụta nke Atụmatụ ScribbleLive, atụmatụ ọdịnaya na atụmatụ nke na - eme ka ikike ndị ahịa nwee ike ịmalite site na atụmatụ ruo na mkpochapụ. Mwepụta nke ScribbleLive Plan bụ ndọtị nke ụlọ ọrụ ha ugbu a ma bụrụ sọftụwia Saas dị ka ngwa ngwa zuru oke.
Dị ka a Nyocha CMI / MarketingProfs, ndị na-ere ahịa nwere usoro ederede ederede nwere ike ịbụ 60% ga-aga nke ọma, mana naanị 32% nwere otu. Atụmatụ na-enyere ndị na-ere ahịa aka iwu ma depụta usoro ahịa ọdịnaya ha ma hapụ ya ka ọ duzie atụmatụ azụmaahịa ha na igbu ya.
Atụmatụ ScribbleLive kwekọrọ na ebumnuche ahịa ọdịnaya site na ndị ọrụ na-eje ije site na usoro nke ajụjụ / mkpebi iji zaa n'oge usoro atụmatụ nke na-enyere aka ịchọpụta ebumnuche / personas. A na-ekekọta ndị ahụ na mpempe ọdịnaya ka ewe gbue ha ma tinye ha na kalịnda usoro / kalịnda iji mee mkpebi kacha mma; dị ka, onye gị na ya na-agwa okwu, ihe ị na-ekwu yana ọwa ị na-ekwu ya.
Na Atụmatụ ScribbleLive
Usoro Ọdịnaya - mepụta ma depụta usoro ahia gị iji hụ na ọ gbanyere mkpọrọgwụ na ọdịnaya niile ị mepụtara.
Ebumnuche na Ihe Mgbaru Ọsọ - wuo onye ozu ahia, isiokwu ọdịnaya, ebe ị na-elekwasị anya ma tụọ arụmọrụ nke ọdịnaya gị na ebumnuche gị.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ - gbarie otu ìgwè ma rụọ ọrụ n'otu oge iji mezuo atụmatụ gị, yana ọrụ onye otu ọ bụla kọwapụtara site na ịhazi akwụkwọ.
Mepụta na igbu - mechie usoro ọrụ dị iche iche ma mekwaa ka ọ dị mfe, belata ọnụ ọgụgụ nke ngwa ọrụ iji kwado mbọ ahịa gị.
Editorial Kalinda - kalenda ederede na-agbanwe agbanwe na nke onye ọrụ iji nyere aka dozie ma jikwaa ọdịnaya gị.
ebipụta - na WordPress tinyere usoro CMS ndị ọzọ yana Facebook, Twitter, LinkedIn na Google Plus.
Banyere Scribble Live
ihe niile dị na ngwọta SaaS na-agwakọta sayensị data na atụmatụ na atụmatụ, okike, na teknụzụ nkesa iji wepụta nsonaazụ azụmaahịa kachasị mma. Ribdị 1000 + na-eji ScribbleLive gụnyere Bank of America, Bayer, Deutsche Telekom, Ferrari, Oracle, Red Bull na Yahoo!
Tags: kalenda ederede ọdịnayaebumnuche ọdịnayanhazi ọdịnayaatụmatụ ọdịnayausoro iheomumenchịkọta akụkọndị mmadụedekọscribblelive atụmatụ